Sary nindramina sy Sary Gasypatriote
Voahaja ny lojika eo amin’ny filaharan’ny FIFA ho an’ny ekipa roa tonta. Faha-95 manerantany (faha-21 aty Afrika) i Madagasikara, raha toa ka faha-107 manerantany (faha-24 aty Afrika) i Niger.
Voalohany vonjimaika, manana isa 6 i Madagasikara ao amin’ny vondrona K misy azy taorian’ireo lalao roa vitany, izay nibatany fandresena roa. Samy manana isa 3, nibata fandreserana iray avy tamin’ireo lalao roa natrehiny i Côte d’Ivoire sy Ethiopie. 0 ny isa azon’i Niger, in-droa resy taorian’ny lalao roa nataony.
« Fotoana izao hampamiratra an'i Madagasikara manerantany, tsy kisendrasendra izany fa hita sy iarahantsika miaina miaraka amin'ny lalao ataon'ny Barea any Niger. Namiratra ny Barea. Tsy maintsy hamiratra i Madagasikara. Misaotra ny ekipa manontolo, misaotra ny mpanazatra. Mirehareha izahay manana anareo. Misaotra ny mpankafy sy mpanohana baolina kitra », hoy ny filoha Andry Rajoelina tao amin’ny pejiny facebook, nanaraka ny fizotry ny lalao.
Malagasy maro no nivoaka teny amin’ny arabe tamin’ireo tanan-dehibe maro manerana ny Nosy, vao vita ny lalao, naneho ny hafaliany tamin’iny vokatra azon’ny Barea iny.
Mety mbola nahazo vokatra tsara lavitra noho iny isika, hoy ny mpahay kitra, raha nentina fiaramanidina manokana ny Barea, amin’izay ampy ny fotoana nakan’ny mpilalao aina taorian’ny lalao natrehiny teo Mahamasina tamin’i Ethiopie.